Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > အထူးကဏ္ဍ > ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ > ရွေးကောက်ပွဲ
ရွှေ့ပြောင်းများအရေး ဦးစားပေးချင်သည့် AMDP မွန်ပါတီ အင်္ဂါနေ့၊ ဧပြီလ ၁၂ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၅၀ မိနစ်	သဲသဲ	မွန်လူထုအတွင်း စားဝတ်နေရေးအတွက် ပြည်ပထွက်ကာ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ များလာသဖြင့် မွန်ဒေသ၌ အလုပ်အကိုင်များ ...
ကျားဖြူပါတီ ကော်မတီနှစ်ခုဖွဲ့	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၅၈ မိနစ်	ကိုဝိုင်း	ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ SNDP ၏ ၃ ရက်ကြာ တောင်ကြီးမြို့ ညီလာခံမှ အကြံပေးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ကော်မတီနှစ်ခု ဖွဲ့ရန် သဘောတူကြသည်ဟု ... ကြံ့ဖွံ့ ၇၆ ရာနှုန်းကျော်ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ဟုဆို	ကြာသပတေးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၅၃ မိနစ်	ကိုဝိုင်း	ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက လွှတ်တော် ၃ ရပ်လုံးတွင် စုစုပေါင်း ၇၆ ရာခိုင်နှုန်းကျော် နေရာအများဆုံးရသည်ဟု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က မနေ့က ထုတ်ပြန်ကြောင်း တရုတ်အစိုးရ ဆင်ဟွာ ...
မဲမသမာမှုဟူသော စွပ်စွဲချက်များ ပေါ်ထွက်နေဆဲ	တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၅၈ မိနစ်	ကိုဝိုင်း	ရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်းများကို ကော်မရှင်က အပိုင်းလိုက် ထုတ်ပြန်နေစဉ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့သည့် ပါတီများကလည်း မဲမသမာမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး စာတင်ခြင်း ...
ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူး RNDP မမျှော်မှန်း	ကြာသပတေးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၃ နာရီ ၁၉ မိနစ်	ခိုင်စု	ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး အင်အား အကောင်းဆုံး ပါတီအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာသော ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP က ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ... ချင်းပါတီများ လက်တွဲရေးအဆိုကို CPP ကြိုဆို	ကြာသပတေးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၄၄ မိနစ်	ဆလိုင်းထွန်း	ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်၌ ချင်းတိုင်းရင်းသားပါတီအချင်းချင်း ပူးပေါင်းလက်တွဲသွားလိုကြောင်း ချင်းအမျိုးသားပါတီ CNP ၏ ပြောဆိုချက်ကို ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ CPP က ...
ထူးမခြားနား အပြောင်းအလဲ	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၀၀ နာရီ ၅၂ မိနစ်	ဒေါက်တာ ရှောင်စမစ်	မြန်မာပြည်တွင်း မဝင်နိုင်သော ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်သူများ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်က ထိုင်းနိုင်ငံခြားသား သတင်းထောက်များ ကလပ်တွင် စုပြုံနေခြင်းက ...
ကြံ့ဖွံ့မှအပ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းပင် မပြည့်သေး	အင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၀၉ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၃၄ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှအပ ကျန်ရှိသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရရှိမှု လက်ရှိ စာရင်းအရ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၏ ... ဖလမ်းတွင် လွှတ်တော်နေရာ အားလုံး CPP နိုင်	အင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၀၉ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၀၃ မိနစ်	ဆလိုင်းထွန်း	ချင်းပြည်နယ် ဖလမ်းမြို့နယ်တွင် ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ CPP က လွှတ်တော် ၃ ရပ်လုံးအတွက် အနိုင်ရကြောင်း ... ရွေးကောက်ပွဲ `ဖိနှိပ်မှု' ကနေဒါ `စိုးရိမ်´	တနင်္ဂနွေနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၀၇ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၅၂ မိနစ်	သောမတ်စ်မောင်ရွှေ	ယနေ့ ကျင်းပသည့် မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေများ အပေါ် `အလွန် ရတက်မအေး ဖြစ်ရကြောင်း' ကနေဒါ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး လောရင့်စ်ကင်နွန်က အစိုးရကိုယ်စား ပြောကြား ...
« ရှေ့ဆုံးမျက်နှာသို့ ရှေ့တမျက်နှာသို့ 1234567 8910 နောက်တမျက်နှာသို့ နောက်ဆုံးမျက်နှာသို့ »	စာမျက်နှာ 1 စုစုပေါင်း 22	.
We have 349 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved